Banyere Anyị - Shijiazhuang Teneng Co., Ltd
Shijiazhuang Teneng Ọdụdọ & Mechanical Equipment Co., Ltd
Shijiazhuang Teneng Ọdụdọ & Mechanical Equipment Co., Ltd. bụ ọkachamara emeputa nke welded ígwè anwụrụ mmepụta akara, oyi mpịakọta akpụ akara, slitting akara, bee-to-ogologo akara na metụtara inyeaka ngwá. Teneng ụlọ ọrụ bụ oge a na enterprise nke ike nke na-nnyocha na mmepe, mmepụta na ahịa. Teneng bụ a kansul so China Roll akpụ Association, a president so Hebei Steel tube Trade Association.
Teneng igwe bụ ndị kasị dị irè tube n'ichepụta ngwá dị na ụwa. Na China, maara nke ọma ọrụ ndị Hebei Jingye Group, SANY Group, China shipbuilding Industry Corporation, Chongqing Changzheng Arọ Industry Co., Ltd wdg
Teneng igwe na-arụ ọrụ na ọtụtụ mba ndị ọzọ e wezụga China, dị ka
American, Portugal, Venezuela, Brazil, Paraguay, Russia, Ukraine, Japan, Saudi Arabia, Sudan, Uzbekistan, Kazakhstan, Vietnam, India, na na. Teneng natara eluigwe na ala otuto si ahịa anyị gburugburu ụwa site na elu àgwà ngwaahịa na nke zuru okè mgbe-ire ọrụ.
Ahịa ina bụ akwọ ụgbọala odudu nke nkà na ụzụ, ike ụlọ ọrụ ike bụ nkwado nke upgrading nke technology. Teneng ụlọ ọrụ ga na-arụkọ ọrụ na-anụ ụlọ na ndị mba ọzọ na-emepụta-ezitekwara elu-edu ngwá, ọkachamara technology, zuru okè ọrụ n'ihi na ndị ahịa.
Ụdị : Teneng
Nke Of n'ọrụ : 150 ~ 200
Year Guzosie Ike : 2009
Ebe ọ bụ na oruru, Teneng ụlọ ọrụ nwere ọkọnọ narị mmepụta edoghi maka ndị ahịa, anyị nwere a akụ na ụba nke teknuzu ahụmahụ. N'okpuru nduzi nke Domestic ọkachamara na ndị ọkachamara, Teneng soro ngagharị nke mba ọzọ elu technology, na-adọrọ, ihe na ịzụlite mgbanwe oyi akpụ nke teknụzụ. Teneng si akụrụngwa na-eji na API ọjà, akpakanamde, ewu anwụrụ, ngwá ụlọ ọjà, akpa n'ichepụta, ngere ogwe, egwuregwu na ngwá na na.
Teneng ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ nde square mita nke factory, na-enwe a ike nchikota usoro na welder na ebu rụpụta. Equipment ọkọlọtọ akụkụ na-ahọrọ a maara nke ọma enterprise ngwaahịa, enwekwukwa ngwaahịa arụmọrụ ma ọrụ ndụ. Si akụrụngwa nhazi nzukọ igwe, anyị na-eme-achọpụtazi na niile etoju, na-ebu na usoro nke mmepụta ọrụ. Mgbe ọrụ onye na-azụ si na-eme, na-na ngwá nyere ọtụtụ afọ, na-edozi iche iche nsogbu na mmepụta omume, nduzi ngwá echichi na ọzụzụ ọrụ n'ihi na ndị ahịa.
Strong oru ike na zuru okè ọrụ usoro bụ Teneng si nkuku.
Teneng nwere 15 imewe injinia na 80 ọrụ engineer, ha nile nwere ihe karịrị afọ 15 nke ahụmahụ na tube na nkume igwe nri ụlọ ọrụ. Teneng mkpara na-mgbe na-eje ije na-eduga ọnu technology, nsuso ọhụrụ tolite na tube na nkume igwe nri technology, n'ime n'ime ahịa na mgbanwe nke ndị ahịa mkpa, ka innovations na elu uzu eji na ngwaahịa.